Ungayithoba njani indawo ukusuka kwi-MacOS ephezulu yeSierra ukuya kwi-MacOS Sierra | Ndisuka mac
UJordi Gimenez | | Mac OS X, Tutorials
Olu khetho lunokufumaneka kubasebenzisi abane-macOS Sierra version efakiweyo ngoku okanye ngokuthe ngqo kwi-installer kwi-USB esele yenziwe. Ukusukela namhlanje, njengoko sibhala eli nqaku, inguqulelo entsha ye-MacOS High Sierra sele ikhutshiwe kwaye kunokwenzeka ukuba uninzi lwabasebenzisi abanayo iMac ehlaziyiweyo, kule meko Kubalulekile ukwenza le diski enokufakwa kwi-USB okanye kwidiski yangaphandle.
Ukuba sele unayo i-MacOS High Sierra efakiweyo, ukhetho esikubonisa lona namhlanje kukufumana uhlobo lwangaphambili lwenkqubo yokusebenza, iMacOS Sierra. Ukwenza uthotho kukho ukhetho oluninzi kodwa olona lucetyiswayo nolunokuthenjwa yenza le bootable USB kwi-Mac eneMacOS Sierra efakiweyonjengoko iya kuba yinguqulelo ethembekileyo nethembekileyo. Ayinamsebenzi ukuba ivela kwi-iMac, iMac mini okanye iMacBook, zonke zisebenza ngokufanayo.
Kwi-intanethi sinokufumana le nguqulo yenkqubo yokusebenza ye-Apple okanye sinokude sithabathe indawo kwikopi endala yeTime Machine, kodwa kungcono ukufikelela ngqo kwi-Mac kwaye wenze isifaki. Ngokwenyani yinto enabasebenzisi abaninzi ukuba senza ufakelo olungena zero kuhlobo ngalunye thaca kwi-WWDC kuba kuyimfuneko ukwenza le USB, le isebenza kuthi ngokugqibeleleyo.
Amanyathelo ekufuneka elandelwe ukubuyela kwi-MacOS Sierra
Inyathelo lokuqala lelona liqhelekileyo: ukhuphelo kuMatshini weXesha okanye efanayo ukunqanda iingxaki kwimeko yokusilela. Eli linyathelo lokuqala kuzo zonke iimeko kwaye ngaphandle kwale kopi emva koko kuza iingxaki zelahleko yedatha, njl.
Ngoku kufuneka yenza isifaki seMacOS Sierra Oko kunokwenziwa ngokulula usebenzisa ubuncinci be-8GB USB. Ukwenza oku, sinokulandela la manyathelo aphantse afane nokwenza i-macOS High Sierra installer kwaye enze ufakelo olungenaqanda:
Xa sineMacOS Sierra kwiMac sifaka i-USB ye-8GB okanye nangaphezulu
Sifomatha kwaye sayithiya ngokutsha igama le-USB ukuba libe yi "Untitled"
Sivula iTheminali kwaye sincamathisele le khowudi ilandelayo: Isudo / ii -application / Faka i-MacOSSierra.app/Contents/Resource/createinstallmedia –volume / Volumes / Untitled-applicationpath / Applications / Install \_ macOS \_ Sierra.app –nointeraction
Sifaka iphasiwedi yomsebenzisi kwaye siyilinde ukuba igqibe
Xa le nkqubo igqityiwe (iyakuthatha kancinci ngokuxhomekeke kwisantya seMac kunye ne-USB) konke ekufuneka sikwenzile kukufomatha idiski apho sinayo inkqubo yokusebenza ye-MacOS High Sierra efakwe kwiDisk Utility yiyo loo nto. Ngoku lithuba lethu faka kwi-USB kwaye le nto ekufuneka siyenzile yile cima iMac kunye ne-USB eqhagamshelwe kwikhompyuter xa ijika cinezela Alt, Sikhetha i-USB ukufaka iMacOS Sierra kwaye xa igqibile siya kuba nayo iSierra kwiMac.
Kuyacetyiswa ukuba usebenzise iMacOS ePhakamileyo yeSierra kuba umahluko phakathi kwezi nkqubo zimbalwa kwaye asizukubona ukuphuculwa xa kukhutshelwa ingxelo, kodwa sishiya oku ezandleni zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Indlela yokwehlisa isantya esivela kwi-MacOS ePhakamileyo yeSierra ukuya kwi-MacOS Sierra
Kernel Panic sitsho
Ndingayenza njani i-MacOs SIerra usb ukuba ayisabonakali kwiAppStore?
Phendula kwiKernel Panic
UJuan B Salas sitsho
Apha uyikhuphele https://support.apple.com/es-es/HT208202
Phendula uJuan B Salas
Kukho enye indlela ... ithutyana elincinci kodwa elisebenzayo ukuba ufuna ukwenza i-USB nge-OS Sierra (kuba andizithembi iinguqulelo ezikhoyo ngemisinga). Kukuthoba i-El Capitan ... kolu hlobo ukuba unokubona kwicandelo elithengiweyo i-OS Sierra uyikhuphele kwaye wenze i-USB.
UCarlos Leon sitsho
Ndisebenzise isarha ephezulu, kodwa ekubeni ndinayo iMacBook Pro yam icotha kunesiqhelo, iyavala iiapps, kuthatha ixesha kwaye kuyandikhathaza ... andonwabanga.
Phendula u-carlos leon
Paqui Ukuya sitsho
Ndikunye noCarlos Leon, kuba ndibeke isar ephezulu kwimacbook pro yitapile enezitshixo. Ndonwabile kakhulu ngeSierra, yonke into yayihamba kakuhle kwaye isebenza. nge-sierra ephezulu yonke into iyaphazamiseka, kuthatha iminyaka eliwaka ukuqala ngokuthelekisa eyangaphambili kwaye yonke into iyavala, ixhoma okanye ngokulula iinkqubo azihambelani nefomathi entsha. Yiza, ngebebesitsho nokuba yinguqulelo esemthethweni, iziphatha njenge-beta kwisigaba sayo sesibini ubukhulu becala. Ndicinga ukuba iyakuba lixabiso eliya kuhlawulwa ngenkqubo yasimahla, kodwa yiza ... kwixesha elizayo ndiza kulinda kancinane ngaphambi kokuhlaziya
Phendula Paqui Ku
Kwenzeka into efanayo kum njenge-2 yokugqibela. Siphucule sonke kwi-ofisi (yoyilo) nakwiikhompyuter ezindala (phakathi ku-2009) zihlupheka kakhulu… kwaye zonke zicotha kancinci. Ngaphandle kwento yokuba siphelelwe ziiplagi zomphathi wefonti (FontAgent) kuba inika iingxaki ezininzi kwaye ndiqinisekile ukuba zezikaMacOs.
Kuthathe ixesha elide ukuhlaziya izixhobo kwaye ngoku lixesha elide ukunciphisa ... andikukhuthazi nakubani na. Ubuncinci okwangoku!
IMauricio Penagos sitsho
Namhlanje ndiye eHigh Sierra kwaye uOfisi 2010 wayeka ukusebenza neSierra, kwakulungile. Ndingenza ntoni ngoku? Kufuneka ndithenge iOfisi entsha?.
Into embi kukuba ngesoftware yokucoca (uGqirha ococekileyo) ndacoca yonke ikhompyuter, iifayile ze-junk system, njl.
Phendula uMauricio Penagos
UJuan David sitsho
Kufuneka ufake eli khonkco kwi-apile efanayo https://support.apple.com/es-cl/HT208202Kukusa kwivenkile ye-app ekubonisayo inguqulelo yeMacOs Sierra ukuze ukhuphele kuhlobo lwangaphambili, ukhuphele kwaye unakekele yonke into.
Phendula kuJuan David
Mholweni! Ayizukundivumela ndiyifakele, ithi yindala kakhulu, ukuba uyazi ukuba ndingenza ntoni ukuyifaka?
Mholweni! Ayindivumeli ukuba ndiyifake nayo, ikwathi indala kakhulu inguqulelo, ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba makenze ntoni ukuyifaka?
Kwithiyori, oko ikubonisayo kukuba kukho ingxelo ehlaziyiweyo efakwe kwikhompyuter kwaye kufuneka ucofe uqhubeke kwaye yiyo.
Molo, ungahamba ukusuka kuhlobo oluphezulu lweSierra uye eSierra ngokuPhezulu ube yinkqubo yokusebenza esisiseko?
Ukuba kunjalo, ngaba iwaranti ilahlekile?
URogelio Arrambide sitsho
Unjani, ngubani onokundinceda?
Yonke into ibilungile kwaye andikuthandi ukuhlaziya i-OS xa zintsha kuba ZIHLALELA zizisa iibugs, ke kude kube ziiveki ezi-2-3 ezidlulileyo ndaye ndagqiba kwelokuba ndihlaziye eSierra, yonke into icacile kwaye ndicinga ukuba impazamo yam kukuba ndibone ukuba elona xesha litsha leSierra ephezulu kunye neentsuku ezimbalwa kamva, ndaye ndayihlaziya ndaya kwi-HIG Sierra kwaye ukusuka apho intloko yam yaqala !!!!!.
Kuqala ngento yokuba izicelo ezingama-32bit azizukuphangela zisebenze kungekudala, apho ndisebenze ngokugqibeleleyo neOfisi ka-2011 okanye ngo-2010, andazi ke ngoku ngoku kuzakufuneka ndithenge ezintsha, ke kuqala ndigqibe kwelokuba ndijonge yayo kwiYouTube kwaye ikhutshelwe ngo-2016, ndothuswa kukuba ibiyi-32bit nayo !!!!! ... Ngapha koko, inyani kukuba umatshini uyacotha, xa uskrola kwezinye iindawo kubonakala ngathi ngama-486 ukusukela ngo-2000 kwaye ngokubanzi amanye amalungu ayecotha kakhulu kunangaphambili.
Ngoku, andikwazi ukuprinta !!!, ukuba ndiza kuprinta ngale nguqulo nayo yonke into, kodwa ukusukela izolo, umshicileli unqumama, uthumela into yokuprinta, ifikelela kuluhlu lokuprinta nakwi «iqhosha lokudlala» ithi phinda ushicilele, uyayicofa, iqala ngokungathi izakuqala, iqhuba ibha yoxwebhu kwaye emva kwemizuzwana eyi-3-4, ibuyela kwimo enye, umba kukuba ukuba ndingashicilela kwakuloo mshicileli i-HP yemisebenzi emininzi, isuka kwenye ikhompyuter, kwi-iphone, njl njl. Ndide ndivule i-HP Utility, ndiyaprinta ixesha lovavanyo kwaye ndiyiprinte, ndiyinika iskena kwaye iyasebenza…. YONKE INGXAKI YINKCUKACHA kwi-MacBook yam ...
Sele ndiyenzile yonke into, ndaphinda ndamisa ukuphrinta kwangaphambili, yiya kwithala leencwadi kwaye ukope com.apple.impresion, njl njl njl, susa uphinde ubeke umshicileli kwakhona, YONKE INTO !!!.
Ukuthandabuza kwam ukuba kunzima kangakanani ukubuyela eSierra, kwenye yazo de kube yiCapitan, kuba ikopi yokugqibela endinayo, yayikukuba ndandiseSierra, ngeSierra ePhakamileyo andimiseli umatshini wexesha ukwenza iKopi, kodwa Ndiyoyika ukuba ukuba ndenza ikopi yogcino kunye neSierra ePhakamileyo, andisayi kuyisebenzisa eSierra, nangona kunjalo, ikopi sele ineeveki ezi-2 ubudala kwaye ndiwalungisile amanye amaxwebhu, ngakumbi iDropbox !!! ..
1.- Ngaba ndingenza ikopi yokuncedisa ukuze eli lelona xwebhu langoku kwaye ukusuka apho ndinokwenza yonke inkqubo yokufaka iSierra kwaye ndingayincamathisela ngaphandle kokundicela ukuba ndihlaziyele iSierra ePhakamileyo?
Ngaba ndiza kuba nayo nayiphi na ingxaki eyakhuthazwa iMacBook?
3.- ndingaba ngelinye ixesha ndicinge ukuba intsebenzo ebendinayo neCapitan, ndingayifumana ne-High Sierra?
4.- Yeyiphi imingcipheko yokukopa ngokulula ifolda yeDropbox ukuze usebenzise ikopi yogcino yeSierra emva koko ubeke iDropbox endaweni yayo?
5.- Ngaba ingxaki yomshicileli inxulumene?
Phendula uRogelio Arrambide
UFederighi uqinisekisa ukuba iiFusion Drives ziya kuhambelana nenkqubo ye-APFS